vendredi, 10 mai 2019 21:24
Ambanja: Nampidirina am-ponja i Ali Sarety fa manelingelina ireo "mafia" lavanila hoy ireo mpiara-dia aminy
Ny fiafaran'ny tolakandro teo, ity filoham-boninahitry ny fikambanana "Zanak'Ambanivolo miaradia" ity no nampidirina am-ponja. Nenjehina ho manery sy mitsabaka amin'ny asan'ny mpitandro filaminana i Ali Sarety amin'ny fanenjehana ireo mpangalatra lavanila aty amin'ny faritra Sambirano.
Sarotiny amin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny tantsaha, indrindra manoloana ny firongatry ny halatra lavanila i Ali Sarety. Manelingelina ireo mpanao hosoka sy mpibizina ny fijoroany hiaro ny tantsaha. Izay rahateo no heverin'ny mpiray fikambanana aminy ho anton'izao fampidirana azy am-ponja izao, mba hampangina sy hamitsahany.
Depioten'Ambanja teo aloha i Ali Sarety ary filoha amperinasan'ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ato amin'ny Distrika Ambanja ihany koa. Ny TIM izay anatin'ny fampielezan-kevitra ho fampandaniana ny kandidany amin'ny fifidianana solombavambahoaka hatao amin'ny 27 mey 2019.
Nihaona tamin-dRamatoa Lantosoa Rakotomalala, Minisitry ny Indostria, Varotra ary ny Asa tanana teto amin'ny birao fiasany Anosy-Antananarivo, omaly, ireo delegasiona Maorisiana manatanteraka asa eto an-toerana.
Fihaonana natao hirosoana amin’ny dingana manaraka amin’ny fanatanterahana ny fametrahana ilay "Faritra indostrialy" ao Moramanga ity.
Nanatrika izany ny Birao misahana ny Fampandrosoana ara-Toekarena Madagasikara (EDBM) izay nanao sonia ny fehezan-dalàna mamaritra ny fifanarahana sy fiaraha-miasa ara-toekarena sy ara-teknika eo amin'i Madagasikara sy i Maorisy.
Roa volana izao no efa nanomboka ny asa fampitoviana tantana ny tany malalaka mirefy 35ha hihaonan'i Papa François amin'ny Mpino Malagasy amin'ny 8 septambra 2019.
Niditra nijery ny fizotry ny asa teny Soamandrakizay Androhibe Antananarivo androany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina niaraka tamin’ny Filankevitra Episkopaly Katolika.
Efa voafaritra ny ho endriky ny toerana ary voalaza fa efa neken’ny fiketrahana masina tany Rôma ny drafitry ny toerana naseho tany an-toerana.
Miditra amin’ny dingana manaraka ny asa ankehitriny ary hovitaina ara-potoana ny fanomanana ny toerana.
vendredi, 10 mai 2019 18:44
Fitaterana: Nidoboka i ANDRIAMISATA Faly Nirina, saofera taxibe nanompa Polisy sy nanary mpandeha
Nivoaka androany ihany ny didy savaranonando tamin'ilay raharaha mpamily taxibe niodina, ary nikasa anary mpandeha. Rehefa raikitra anefa ny sahotaka tanaty fiara dia nanompa ilay Polisy mpandeha ity mpamily, ka dia niantso ny namany ity polisy ka nanenjika sy nanakana ilay taxibe nirifatra, ka dia tratra tetsy Andavamamba, ary dia nogiazan'ny polisy 5e arrondissement ny mpamily sy ny fiara.
Nakarina teny amin'ny fitsarana androany ihany ny raharaha. Niaiky ny heloka vitany ilay mpamily, na dia nandà izany tany amin'ny famotorana nataon'ny polisy azy.
Tsy namela azy ody anefa ny fitsarana fa avy dia nidoboka eny Antanimora i ANDRIAMISATA Faly Nirina, ary miandry ny fitsarana azy ny alatsinainy 13 mey izao.
Raha ny resaka nandeha teny moa dia mitonona ho zanak'olona ambony ity mpamily ity, ary malaza eo anivon'ny kaoperativa, fa manana rahalahy saofera efa voaroiroy amin'ny fikasihan-tanana polisy ihany koa, izay efa nigadra, fa nalaky nivoaka ary mbola mamily fiara amin'izao.
vendredi, 10 mai 2019 18:13
Sambava: 10 000 Ariary no namahana ny « menottes » tamin’i Meguy
Meguy dia avy any ambanivohitra mpiasa lavanila ao Marofotra, Kaominina Anjijaomby izay nitomany raha nijoro vavolombelona tamin’ny nanjo azy teny amin'ny sakana ataon’ny mpitandro filaminana.
''Tonga teo Ambolimadinika dia nosakanan’ny Polisy ny tenako ary nanontaniana ny taratasin’ny moto. Mbola « assurance » no misy fa tsy mbola tonga ny taratasin'ny moto. Raha izay dia tsy maintsy manao rakitra eto aminay. 2 000Ar no nataoko rakitra dia tsy noraisin'izy ireo. Voatery niverin-dalana aho ka niaraka tamin'izany dia nifanojo tamin'ny lehiben'ny Faritra SAVA teo aloha izay ampanaovana ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana ho solombavambahoaka ka nilaza ity farany ity fa afaka manohy ny dianao ho any Sambava ihany ianao fa avelao aho hiresaka amin'ireo Polisy.
Vao nahavita teo amin'ny 5km teo ho eo aho dia voasakan’ny Polisy hafa indray teo Ambarihomiambana. Nanontany ny taratatasin’ny moto ihany koa ireo sady nametaka « menottes » tamin’ny tanako, izay vaky ra. Nanolotra 10 000Ar vao afaka nandeha. Mangataka ny fanamorana ny fikarakarana taratasin’ny moto izahay fa tsy hoe : izahay no malaina», hoy i Meguy nitantara ny nanjo azy.
vendredi, 10 mai 2019 17:47
Kitra: Nitarina hatramin’ny 2021 ny hilalaovan’i Bôlida ao amin’ny Paris FC
Nohalavain’ny mpitantana ny Paris FC hatramin’ny vola jona 2021 ny fe-potoana ilalaovan’i Lalaina Nomenjanahary, na Bôlida araka ny ahafantaran’ny maro azy amin’ny baolina kitra, ao amin’ity klioba mifaninana amin’ny Ligy faha-2 any Frantsa ity.
Tamin’ny taona 2016 i Bôlida no nanomboka nilalao tao amin’ny Paris FC. Midika izao fanalavana taom-pilalaovana izao fa mamiratra ary andrin’io klioba io ity mpilalao malagasy ity.
33 taona izao i Bôlida.
vendredi, 10 mai 2019 17:34
Farafangana: Kamiao mitondra mpiantsena notafihin’ny dahalo
Kamiao mitondra mpiantsena no nisy nanafika tamin’ny lalam-pirenena faha-27, mampitohy an’i Lohatragnambo sy Farafangana. Sahabo ho 20km tsy ahatongavana tao Farafangana no nisehoan’ny fanafihana, omaly hariva.
Dahalo valo lahy mitam-basy sy zavamaranitra toy ny antsy no nanafika. Voaroba avokoa ny vola sy firavaka volamenan'ireo mpamonjy tsena. Nisy 11 ireo maratra ary tsaboina ao amin’ny hopitaliben’i Farafangana.
Tonga nijery sy nandray fepetra haingana manoloana izao asan-dahalo izao ny Lehiben'ny faritra Atsimo Atsinanana Ramanana Mampody.
Omaly ihany dia efa roso manao hazalambo ireo olon-dratsy ny Zandary.
vendredi, 10 mai 2019 17:32
David Beckham: Voasazy fa mitondra fiara sady mitelefaonina
Nosintonina ny taratasy fahazoan-dalana hamily fiara (permis de conduire) ary voasazy tsy hahazo hamily fiara mandritra ny enim-bolana miampy lamandy 870 euros ilay Anglisy mpilalao baolina kitra kalaza, David Beckham.
Fampiasana finday sady nitondra fiara mandeha mafy no nanasaziana azy. Niaiky ny fandikan-dalana mifehy ny fifamoivoizana nataony i David Beckham. 44 taona izao ity farany.
vendredi, 10 mai 2019 16:28
Le chemin vers le pouvoir est pavé de bonnes intentions
Tout a commencé en 1994 durant le mandat du premier président de la 3ème République. Craignant les conditions de l’ « ajustement structurel » réclamés par les bailleurs de fonds, le Professeur Zafy Albert chercha d’autres sources de financement dites « parallèles » que faisaient miroiter son entourage.
En l’acceptant, il plongea son pays, qu’il a voulu sauver, dans un des scandales retentissants, mais en même temps, il a ouvert une nouvelle ère, celui de l’opacité des mouvements financiers, et surtout de l’escroquerie à haut vol (fanambakana sy halatra avo lenta).
Tous les Malagasy âgés actuellement de 45 ans et plus se souviennent encore de l’affaire FLAMCO.
C’est une filiale d’une société suisso- liechtensteinoise Flamco Aktien Gesellschaft(AG) qui proposa son aide, ou plus exactement son financement au gouvernement de l’époque. La réalité en est tout autre, ce fut l’arnaque du 20ème siècle dont les principaux auteurs sont ceux qui ont été ou proches des responsables de l’époque.
vendredi, 10 mai 2019 16:15
Fifidianana solombavambahoaka: Miofana ireo delegen'ny kandida
Tanterahina omaly sy androany etsy amin'ny Carlton Anosy ny fanofanana mpampiofana ireo solontenan'ny antoko sy ny kandida ato amin'ny faritanin'Antananarivo, hiatrehana ny fifidianana Solombavambahoaka izay hatao amin’ny alatsinainy 27 mey 2019.
Voalohany no nisy izany fanofanana ny delegen'ny kandida izany mikasika ny zo ananan'izy ireo mandritra ny androm-pifidianana.
Ho an'ireo any amin'ny faritany 5 hafa, ankoatra an'Antananarivo, dia misy ihany koa ny fanofanana toy ity, izany dia iarahan'ny CENI miasa amin'ny EISA.